नानीहरुमा खाना ख्वाउनुको समस्या (तपाईको नानीको खानुमा सुधार ल्याउने समान्य भन्दा विपरीत समाधान) खाना मा कम रूचि (यस्लाई पिक्की, फस्सी, चूसी वा फड्डी ईटिंग पनि भनिन्छ) नानीहरूमा साधारण अवस्था हो। लगभग 50% साना नानीहरूमा यो देखा परिंछ। यी नानीहरू कमती खांछन, बिस्तारै खांछन, खानामा कम रुचि गर्छन्। उनीहरू सीमित प्रकारको खाना स्वीकृति गरछन, नयाँ प्रकारका खाद्य पदार्थ चाखन चहानन, तरकारी र फलहरूको सीमित सेवन गरछन र खाना प्राथमिकतामा जिद्दी हुन्छन। यो केटा र केटीहरूमा समान रूपले देखिंछ र मध्यम र उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्गमा बढी हुने सम्भावना हुन्छ। यो परिवारमा पनि चल्छ। खानाको गडबडी प्राय: भविष्यमा स्वास्थ्य, विकासात्मक वा सामाजिक समस्याहरूको कारण हुँदैन। अन्य नानीहरूको तुलनामा खानामा कम रूचि राखने नानीको उचाई र तौल बृद्धि समान हुन्छ। यद्यपि, फलफूल र तरकारीहरूको कम सेवनको परिणाम स्वरूप ती नानिहरुलाई कब्ज हुने सम्भावना हुन्छ। नोट गर्नुहोस् कि मैले "पीडित" को सट्टा "देखा परिंच्छ" शब्द रोजेको छु किनकि प्राय यो विकासको सामान्य भाग हो। नानीहरू4-5बर्ष हुने बित्तिकै, खाद्य उथलपुथल प्रायः कम हुँदै जान्छ।
खाना अस्थिरताको कारणहरू (तपाईंको नानीले किन केही खाँदैन?)
खाना मा कम रूचि को कारण जटिल छ र यसमा खराब खानाको गुणस्तर, आमा बुबा वा परिवारको अनुपयुक्त आहार व्यवहार, खाना विविधताको अभाव, र पारिवारिक सामाजिक वातावरण समावेश हुन सक्छ। प्रत्येक नानीमा, एक भन्दा बढी कारणहरू हुनछन्, र साथै सबै नानीहरूसँग निम्न सबै नहोलान्।
1. विकास दरमा सुस्ती - शैशव अवधिमा (पहिलो 1 वर्ष) तीव्र विकास पछि यसको दरमा सुस्ती हुन्छ। यो 1 देखी3बर्ष सबै भनदा कम हुन्छ (जबकि परिवारलाई नानी को विकास र खानाको मात्रा लागी अपेक्षा बढ्दछ)।
2.भावनात्मक अस्थिरता - साना नानीहरू धेरै मुड र भावनाहरूमा परिवर्तनद्वारा प्रभावित हुन्छन्। नानी बढ्दै जाँदा सुधारिएको विकास दर, भावनात्मक परिपक्वता, र खानुमा बढ्दो स्वायत्तता कारणहरू हुन् जस्ले गडबडी कम पार्छ।
3.अभिभावकीय र घरेलु प्रभाव- यि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो र ती कारक हुन जुन परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो स्थापित छ कि पारिवारिक वातावरणको नानीहरूको खाने व्यवहारमा प्रमुख प्रभाव हुन्छ। परिवारका यी ब्यबहारहरूका उद्देश्य नानीमा खानेकुराको मात्रा र गति बढाउनु हुन। तर यसले लामो दौडमा खाद्य अस्थिरता निम्त्याउँछ। नानीको घरका कारकहरू जसले गर्दा वा बढ्दो खाने बानीले खराब बनाउँछ निम्न हून-
आमा बुबा आफै खाना मा आनाकानी गर्ने - नानीहरू आमा बुबा को खाने बानी प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। जब आमाबाबु नानिको खान पीन को व्यवहार ले चिन्तित हुन्छन् र नानीलाई दण्ड दिनछन, घूस दिनछन वा खाने बानीको लागि पुरस्कृत गरछन तब यो विकसित हुने र जारी रहने बढी सम्भावना हुन्छ।
अभिभावकको चिन्ता (र टिप्पणीहरू)-"पातलोपन" वा "कम ऊंचाई" वा नानी को खाने बानीको बारेमा विशेष गरी अर्काको नानीको तुलनामा। याद गर्नुहोस् हाम्रो आमाबुवा वा समाजले अरूको तुलनामा हामीले थोरै अंक पाएका छौं वा थोरै तलब को नौकरी गरेका छौं भने टिपण्णी गर्दा हामीलाई कस्तो लागथियो? समान मनोविज्ञान नानीहरूमा सञ्चालन हुन्छ।
पूरक खाना को परिचय को अनुपयुक्त समय- यदि अनन्य स्तनपान6महिना को लागि गर्नुभएन भने यसले प्रारम्भिक समय मा नै खाना खवाऊनुमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ6महिना पुगेपछी पूरक खाना सुरू गरेन वा9महिनाको उमेर सम्म ढेलेको खानेकुरा दिएन भने खानामा गडबडी हुन सक्छ। सुरुवातको गडबडी लामो समय सम्म रहनु सक्छ।
नानीको लागि भिन्न खाना- आमा बुबा अक्सर नानीहरूको लागि भिन्न खाना पकाउंछन। एक देखि डेढ़ बर्ष उमेर पुगे पछी पनी। यो डरको कारणले हो कि नानीले परिवारका अन्य सदस्यहरूका लागि पकाएको खाना चबाउन वा पचाउन सक्दैन भनेर। वा जब नानीले अरूको लागि तयार खाना खान अस्वीकार गर्छ। लामो समय मा, अलग खानाले खाद्य अस्थिरता निम्त्याउँछ।
सधैं नानी लाई आमा बुबाले ख्वाउने बानी -नानिहरू एक वर्ष उमेर देखी स्वयं खवाईमा भाग लिन तयार हुनछन्। जब नानी आफैंले खान्छ, उसले खानेको गति र मात्रा (र कहिलेकाँही खाद्य सामग्री) पनि निर्णय गर्न सक्दछ। अभिभावकहरूले खुवाउँदा स्वायत्तता हराउँदछ र यो नानीको लागि अप्रिय अनुभव हुन सक्छ।
खाना बारे गलत विचार-कोशिस नगरीकन सोच कि नानी लाई कुनै विसेश खाना मनपर्दैन (मसलादार, तीतो, वा खट्टा स्वाद) वा केहि खाना पचाउन सक्दैन। साथै, खाद्य चीजहरू बारे वैज्ञानिक आधार बिना विश्वासहरू (यद्यपि यो वैज्ञानिक लाग्न सक्छ)। उदाहरणका लागि, रूगा-मार्गी मा केरा वा अन्य फलहरू बेवास्ता वा ज्वरोमा कुखुराको बेवास्ता (कुखुरा गरम रगत भाको प्राणी हो र यस्ले ज्वरोलाई गंभीर बनाऊन सक्छ सोचेर)।
व्याकुल गर्न मोबाइल वा टिभीको प्रयोग- यी भोजनको गति बढाउन प्रयोग गरिन्छ, तर लामो दौडमा खनुमा गडबडी उत्रन्छ। अध्ययनले देखाउँदछ कि अत्यधिक स्मार्टफोन प्रयोग (खाना नखाने समयमा पनि) नानीहरूको नकारात्मक खाना व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। यसको कारण उनीहरूको प्रयोगले दिमागमा डोपामाइन रिलीज गर्दछ (एक खुशी र लत गराउने रासायन), जो स्वस्थ खाना प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छ। हामी आफैं भिडियो गेम वा फेसबुक च्याटमा व्यस्त भई धेरे पटक खाना वा सुत्नु निलम्बन गरेका छौं। विज्ञापनले नानीलाई गुलियो र कम पौष्टिक खाना को इच्छा बढ़ाऊंछ।
खाना ख्वाउनुको समस्याको रोकथाम र उपचार (तपाइँ तपाइँको नानीको खाने बानी सुधार गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?)
खानाको अस्थिरताले सामान्यतया नानीहरूको बृद्धिलाई असर गर्दैन, तर व्यवहार चरम छ भने नानीलाई एक पटक बाल रोग विशेषज्ञलाई देखाऊन म सिफारिश गर्छु। अक्सर बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा आश्वासनले आमाबाबुको प्रतिक्रियालाई सुधार गर्छ जसले नानीमा खाने बानीमा सुधार ल्याउँछ। यदि नानीको तौल र उचाई सामान्य छ भने (जो बेसि जस्तो देखा पर्छ) चिन्ताको विषय हुँदैन। यदि तिनीहरू असामान्य छन् भने, बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जाँच उपयोगी हुन्छ। डॉक्टर को यो दौरा अन्य बिरामी हूंदा पनी गर्न सकिंछ। यदि तपाइँ खाद्य समस्याका लागि बाल रोग विशेषज्ञको भ्रमण गर्न हुन्छ भने, यो यात्राको तीन दिन अघि सम्म नानीले खाएको सबै कुरा लेखेर राखनू होस। तपाईं आफै पनी नानी को विकास इन्डियन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स ग्रोथ चार्ट ऐप प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ।
कुनै खास पकवान समाप्त गर्नु भन्दा खाना खाऊन समस्या रोक्न वा उपचार लागि दीर्घकालीन लक्ष्य राख्नु पर्छ। यो मानसिकता सबै रोकथाम र उपचार रणनीति को आधारशिला हो। यदि तपाईं आफ्नो नानीको लागि यो मानसिकता अपनाउन चाहानुहुन्न भने, निम्न कुनै पनी ज्ञान ले सहयोग पुर्‍याउँदैन। यो पनि याद राख्नुहोस् कि यदि तपाइँको नानी को खाने बानीमा रातारात परिवर्तन हुँदैन। नानी को खाने आदत प्रति बेवास्ता गर्नुहोस् र नानीको यसलाई इनाम वा सजा नदिनुहोस।
पहिलो 1 वर्ष(शैशवकाल)
छह महिना सम्म लागि केवल स्तनपान गर्नुहोस र त्यस पछि पूरक खाना को प्रारंभ गर्नुहोस्। चाँडै नै विभिन्न तरकारीहरूको परिचय दिनुहोस् (एक पटकमा एक)। पछि म शिशु र बाल्यकालिन भोजनको लागि छुट्टै लेख लेखने छु। नौ महिना उमेर सम्म ढल्काउने र दानायुक्त खाना सुरू गर्नुहोस्। यस चरणमा पनि नानीलाई आत्म-खवाईमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्नुहोस् (खानामा औँला डुबाएर)।
परिवारको खानामा स्विच गर्ने र स्वायत्तता बढाउँने चरण
1. नानी लाई परिवारका अन्य सदस्यहरू लाई बनाए को खाना दिनुहोस
नानीलाई 1 बर्षको उमेर पूगे पछी घरमा बनाएको सबै चीज खान प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यस समयमा उनीहरूले परिवारका अन्य सदस्यहरूका लागि तयार गरिएको खाना खान पर्छ। नानी लाई चबाऊन र नीलन सुविस्ताको लागी अलिक पातलो बनाऊन सकनुहुन्छ। यद्यपि धेरै पानीले पौष्टिक तत्त्वहरू कम हुन्छ र यसले कुपोषण हुन सक्छ। आमा बुबा र परिवारका अन्य सदस्यहरूले समान खाना खाइरहेका रोल मोडेलको रूपमा कार्य गर्दछ जसले नानीलाई खाना खान प्रोत्साहित गर्छ। यदि तपाईंले धेरै फलफूल र तरकारीहरू खानुभयो भने, तपाईंको नानीले पनि खाने छ।
2. अर्डर पाऊंदा तुरुन्त पकौने कुक नहुनुहोस्
नानीले मूल खाना अस्वीकार गरे पछि उसको लागि छुट्टै खाना तयार गर्ने बानी ले लामो समयमा खानाको गडबडीलाई बढवा दिन्छ। नानी लाई खानेको तोकिएको समयको लागि टेबुलमा रहन प्रोत्साहित गर्नुहोस् चाहे उसले खाओस वा नखाओस।
3. नानी लाई आफैं खानु दीनुहोस
एक बर्ष चम्चा नानीलाई हस्तान्तरण गर्नुको लागी पनी सहि समय हो। एक बर्ष देखि नानीले स्वायत्तताले आफैं खाने जिम्मेवारी लिन सक्छ (आमाबाबुले सँधै खवाई दिने को विपरित)। उनीहरुले सुरूमा धेरै छरेर खानछन, यो प्रक्रियाको अंश हो। अठारह महिना सम्म तिनीहरू धेरै कम छरेर खान सक्षम हुनछ।
4. खाना खाने दिनचर्या राखनु होस
प्रत्येक दिन एकै समयमा खाना र स्नैक्स दिनूहोस्। यदि नानीले खाना खाएन भने, नियमित स्न्याकले पौष्टिक आहार हो अवसर प्रदान गर्छ। यहाँ स्नैक्सको मतलब घरको खाना जस्तै पाकोरा, आमलेट, हलवा इत्यादि हो। तर तपाईले चिप्स, चकलेट, जुस, बेकरी, र फास्ट फूड खाना जस्ता बहिरी स्नैक्सबाट बेवास्ता गर्नु पर्छ। तिनीहरू अस्वस्थ र लत लगौने प्रदार्थ हो र तिनीहरूले भोक मार्छ।
5. तपाइँको नानीको भोक (वा भोकको अभाव) लाई सम्मान गर्नुहोस् -
यदि तपाइँको नानी भोकाएको छैन भने खानेकुरालाई जबरदस्ती नदिनुहोस्। त्यस्तै प्रकारले तपाईको नानीलाई केही खानेकुरा मन छैन भने दबाब नगर्नुहोस्। यो केवल खाना मा एक शक्ति संघर्ष प्रज्वलित पार्छ। साथै, तपाईंको नानीलाई खाने समय चिन्ता र निराशाको घड़ी बन्न सक्छ वा आफ्नो भोक र पेट भरेको संकेतहरूमा कम संवेदनशील हुन सक्छ। नानीलाई कमती खाना पस्किनूहोस् र उसलाई स्वतन्त्र रूपमा थपने अवसर दिनुहोस्।
6. खानाको चयन र पकाऊनुमा नानीको सहभागिता बढाउनुहोस्-
खाना चयनमा (किनमेल र घरको समयमा) र पकाऊनुमा (आमा बुबाको पर्यवेक्षणको साथ) नानीको सहभागितालाई विशेष रूपमा सहयोगी हुन्छ। तपाइँको नानीलाई तपाइँ तरकारीहरू धुन, पकौंदा सब्जी चलाऊंनू, प्रेशर कुकरको सिटीको गिनती वा टेबल सेट गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यदि तपाइँलाई एक निश्चित पकवान मन परदैन तर कुनै कारणले तपाईंले त्यस्को तयारीमा भाग लिनु पर्‍यो भने तपाईंलाई पकवान मन पर्ने सम्भावना धेरै बढछ (र अरुलाई पनी पकवान स्वादिष्ट भयो भन्नू हुनेछ)। नानीहरू हामी भन्दा बढी भावनात्मक हुन्छन्। यदि तिनीहरू सक्रिय रूपमा खानाको चयन र तयारीमा संलग्न छन् भने अक्सर खाना मनपराउँछन्।
7. नयाँ खानाको साथ धैर्य रहनुहोस्-
साना नानीहरूले प्राय: नयाँ खानालाई छुन्छन् वा सुंगछन र उनीहरूको मुखमा साना टुकड़ा हालेर फेरि बाहिर निकालन सक्छन्। पहिले गांस लिन अघि नानीले नयाँ खानसंग बारम्बार खेलनू सक्छ। खानाको रंग, आकार, गन्ध र बनावटको बारेमा कुरा गरेर नानीलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् (खाना स्वादिष्ट छ भनेर होइन)। नानीको मनपर्ने खाद्य पदार्थको साथ नयाँ खानाको परिचय गर्नुहोस। साथै, नानीले पहिलो पटक पकवान अस्वीकार गर्‍यो भने निराश नहुनुहोस् । अक्सर, अपरिचित खाद्य पदार्थहरू क्रमबद्ध दोहोर्याइएको खंडमा नानीले मन पराउन सक्छ l नानीलाई त्यो खाना मन पर्दैन भनेर निश्चित गर्न अघि 10-15 सकारात्मक अनुभवहरू आवाश्यक पर्न सक्छ। धेरै चोटि केहि महिना पछि फेरी तेहि खाना पकाऊंदा नानी लाई मनपर्दछ। तर नानीलाई कुनै खास खानेकुरा मनपर्दैन भने उसलाई लिन जोड नदिनुहोस् (यदि यो केही चीजहरूमा सीमित छ भने)।
8. रचनात्मक बन्नुहोस र प्रक्रिया लाई रमाईलो बानाउनूहोस
धेरै पटक नानीलाई कुनै खास चीज मनपर्दैन (जस्तै ब्रोकोली वा बन्दकोबी) भने सास वा जामसँग खान सक्छ। कुकी कटरको साथ विभिन्न आकारमा सब्जी काट्नुहोस् र कुकीजस्तो आकार दिनुहोस्। बेलुकाको खानाको लागि खाजा दीनूहोस्। चम्किलो र रंगीन खानाको पस्किनुहोस्। साना उमेर मा नै बिभिन्न खाद्य प्रदार्थ हरुको परिचय गर्नुहोस र बिभिन्नतालाई कायम राख्नुहोस्।
9. व्याकुलता न्यूनतम राखनूहोस् -
घरमा स्मार्टफोन र टिभीको प्रयोग सीमित राखनूंहोस्। आमाबाबुदेखी प्रोत्साहन पाऊने हुनाले, नानीहरु मा उनीहरूको प्रयोग तब मात्र कम हुन सकिन्छ जब आमाबाबु आफै तिनीहरूको कम सीमित राख्छ। यदि यो सम्भव छैन भने, खाना खानु भन्दा कम्तिमा आधा घण्टाको लागि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू न चलौने विधि बनाउनुहोस्। नानीलाई आधा घण्टाको लागि अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन दिनुहोस्। चूंकि डोपामाइन वितरण गर्ने गतिविधिबाट अर्को डोपामाइन वितरण न गार्ने तुरन्त स्विच गर्न गाह्रो हुनछ, आधा घण्टाको दूरी सहयोगी हुनेछ। यसले तपाईंको नानीलाई खानामा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि मद्दत गर्दछ। याद राख्नुहोस्, तपाइँको लक्ष्य लामो अवधिमा खाना को गड़बड़ी को रोकथाम र उपचार हो, एक पकवान समाप्त गराऊने हॉइन।
10. इनामको रूपमा चकलेट वा मिठाई कहिल्यै न दिनुहोस
इनामको रूपमा मिठाई वा चकलेटहरूले सन्देश पठाउँदछ कि ती उत्तम खाने चीज हुन्, जसले केवल उनीहरूको लागि नानीको इच्छा बढाउन सक्छ। तपाईं फल, दही, वा अन्य स्वस्थ विकल्पहरू मिठाईको रूपमा पुन: परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, परिवारका अन्य सदस्य र साथीहरूलाई उपहारको रूपमा चकलेट वा चिप्स दिनबाट निरुत्साहित गर्नुहोस्। ऊनीहरूले सट्टामा स्वस्थ खाना ल्याउन सक्छन्। यदि तपाईं आफ्नो नानीलाई पुरस्कृत गर्न चाहनुहुन्छ भने, नखाने कुरा दिनुहोस् (जस्तै पार्क भ्रमण)। ती इनाम पनी एक हप्ता वा त्यो भांद लामो व्यवहार कायम राख्नको लागि दिनुहोस्। यद्यपि तपाईंले नानीलाई कहिले पनि सजा दिनु हुँदैन।
अन्तमा, जब नानीले राम्रोसँग भोजन गरेको हुँदैन, आमाबाबुले प्राय: भिटामिन मांगछन। तर भिटामिन बढी काम गर्दैन किनभने खाऊनु को समस्याको कारण प्राय: माथि वर्णन गरिएको सामाजि र मनोवैज्ञानिक हुन। भिटामिन को कमी ले कम भोक लगेको विरलै हुन्छ। मेरो अनुमानमा सबै नानीहरुमा 5% भन्दा बढी हंदैन। यदि तपाईको वाहनको टायर पक्चर भयो भने जती नै पेट्रोल हाले पनी वाहन चलने छैन। खाद्य अस्थिरताले प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव निम्त्याउँदैन। त्यस कारण नानी लाई भिटामिन को कमी हंदैन। भिटामिनको अनुपयुक्त प्रयोगले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
खाना ख्वाउनुको समस्या
ख्वाउनुको समस्याको उपचार
भिटामिन र भोजन
स्मार्टफोन र भोजन
टिभी र भोजन
मिठाई र भोजन